Farmaajo oo looga yeeray Addis Ababa oo Heshiisyo ku saxiixi doono | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo looga yeeray Addis Ababa oo Heshiisyo ku saxiixi doono
Keymedia Online ayaa sabtidii soo qortay safarka Farmaajo oo hadda ay kasoo baxayaan macluumaad ujeedka socdaalkiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farmaajo ayaa la filayaa in safar uu ugu ambabaxo dalka Itoobiya xili Muqdisho ay ka jirta xiisad siyaasadeed iyo shirar xal loogu raadinayo khilaafka doorashadda Soomaaliya, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Illo kala duwan oo ku dhaw Villa Somalia ayaa u xaqiijiyay Keydmedia Online in Farmaajo looga yeeray Addis Ababa, oo ay ku kulmayaan Afwerki iyo Abiy Axmed, waxaana xogaha aan helayno ay sheegayaan inuu la gali doono heshiisyo amni iyo mid militeri.
Abiy iyo Afwerki ayaa dhawaan ku kulmay Asmara, waxayna wajiga labaad ee kulankooda ku leeyihiin Addis Ababa, iyadoo uu ku biiri doono Farmaajo oo xiriir dhaw kala dhaxeeya labada hogaamiye ee dalalkooda xukumayo iyagoo mudo-xileedkooda dhamaaday, oo aan sharciyad dastuuri ah haysan.
Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan in Farmaajo saddexdii sano ee lasoodhaafay uu ku xirnaa Afwerki oo ah macalinkiisa xukunka kaligii-talisnimada ku dhisan, iyadoo Asmara loogu tababaro kumanaan dhalinyaro ah oo Fahad Yaasiin askareeyay.
Abiy Axmed ayaa mudo-xileedkiisu ku ekaa August 2020, waxuuna sameystay hal sano oo mudo-kordhin ah, halka Afwerki uu yahay kaligii-taliye xoog ku haysta wadanka Eritrea.